राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफैमा एउटा शक्ति भएकोले तत्काल सत्ता कब्जा गर्ने अर्थात अब `कु´ गर्ने हो । - Enepalese.com
राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफैमा एउटा शक्ति भएकोले तत्काल सत्ता कब्जा गर्ने अर्थात अब `कु´ गर्ने हो ।
इनेप्लिज २०७७ कार्तिक ३ गते २३:१० मा प्रकाशित
राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफैमा एउटा शक्ति भएकोले तत्काल राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सीधै सत्ता हस्तक्षेप, सत्ता कब्जा गर्ने , सत्ता खोस्ने अर्थात अब `कु´ गर्ने हो ।
श्री ५ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले समय समयमा वक्तव्य मार्फत राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई चेतावनी दिंदै र खबरदारी गर्दै आएकोमा वक्तव्यको कुनै औचित्य छैन ? विक्रम सम्वत २०४७ सालको संविधान बमोजिम नै राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पहुँच, आँट र हिम्मत छ भने सीधै सत्ता हस्तक्षेप, सत्ता कब्जा गर्ने, सत्ता खोस्ने अर्थात अब `कु´ गर्ने हो ? मुलुकको लागी राजा आफैमा एउटा शक्ति हो ।
मुलुकमा राज्यकोषबाट ढुकुटी रित्तै भएको अवस्था छ तथा विकृति, बेथिति, अराजकता र ढण्डहीनता बढदै गएको छ ।